Ny toeram-pialan-tsasatra tsara indrindra any Andorra sy Espana | Fitsangatsanganana tanteraka
Ny toeram-pialan-tsasatra tsara indrindra any Andorra sy Espana
Fitsangatsanganana tanteraka | | Andorra
Aorian'ny faran'ny fahavaratra dia tonga ny fotoana hieritreretana ireo fitsangatsanganantsika manaraka. Noho izany, eo amin'ny isan-karazany ny mety misy dia ny safidy an'ny mandany andro vitsivitsy hankafizanao ny lanezy sy ny ski amin'ny gara samihafa any Andorra na Espana.
Satria tsy mora ny milaza amin'ny gara manokana, eto ambany no ahafahanao mahita antsipiriany momba ny toeram-pilalaovana ski tsara indrindra any amin'ireny faritany ireny.
Ny resort ski Grandvalira dia tsy mitovy amin'ny an'ny hafa amin'ny maha-izy azy ny lehibe indrindra amin'ny Pyrenees rehetra. Any amin'ny Principality of Andorra no misy azy, amin'izao fotoana izao dia manana tehezan-ski mihoatra ny 200 kilometatra. Ny iray amin'ireo toetra mampiavaka an'io gara io dia manam-pahaizana manokana amin'ny ski Alpine: fanatanjahantena izay misy fidinana làlana amin'ny fotoana lava indrindra, hanarahana ny lalana mihodinkodina. Afaka mahita ny tsara indrindra ianao Fialan-tsasatra mankany Andorra miaraka amin'ny Esquiades.com.
Làlan-kaleha ao Baqueira Beret
Baqueira Beret dia, raha azo atao, iray amin'ireo toeram-pisakafoanana ski malaza indrindra any Espana, satria mpanatrika maro be no manatrika azy io, izay mampiavaka an'i King Felipe VI mihitsy. Ity onjam-peo ity dia manana dian-tongotra marobe izay natao hifanaraka amin'ny ambaratonga isan-karazany an'ny mpitsidika azy. Ireo lalana ireo dia mihoatra ny 155 kilometatra. Any amin'ny Lohasaha Arán, ao amin'ny Catalan Pyrenees, mitsidika azy io no ahafahanao manararaotra azy io mba hankafizanao ihany koa ireo sary mahafinaritra sy ny gastronomie mahafinaritra ao amin'io faritra io.
Fiantsenana formigal dia Tendrombohitra skiable 97 izay manampy hatramin'ny 157 kilometatra. Ity tobim-piantsonana ity ihany koa dia manana vala-oram-panala roa, boardercross roa ary làlan-dranomandry. Ity faritra ity dia manolotra serivisy hafa toa ny ski any an-toerana na ny fitsangantsanganana an-tsokosoko. Ny iray amin'ireo mampiavaka ny Formigal dia ny fizarana ny passer-ny-ny ski amin'ny gara Panticosa, noho izany dia tsy afaka mi-ski fotsiny amin'ireo gara roa ianao fa miala sasatra ao amin'ny spa hita farany. Ny gara Formigal dia any amin'ny faritanin'i Huesca.
Any amin'ny faritr'i Cerdaña, any Catalonia, dia kely ny haben'ny gara La Molina, saingy tsy noho io antony ambany kalitao io. Raha atotaly dia manana tehezan-tany 54 ilay toeram-pialan-tsasatra izay mahangona kilometatra skiable 61. Ny gara La Molina dia fantatra eran'izao tontolo izao noho izy nampiantrano maro an'isa hetsika iraisam-pirenena eo amin'ny tontolon'ny ski. Anisan'ireo serivisy azo atao ny mahita mitaingina mitaingina oram-panala, fitsangantsanganana amin'ny moto sy ranomandry, ankoatry ny hafa.
Ny toeram-pitsangantsanganana Sierra Nevada dia malaza amin'ny maha-iray amin'ireo toeram-pialan-tsasatra tsara indrindra any Espana. Tao anatin'izay taona faramparany izay dia niavaka noho izany ny gara fandaharana midadasika natokana ho an'ny ankizy. Amin'izany fomba izany, ny toeram-pialantsasatra ao Sierra Nevada dia manana hantsana namboarina ho fanazarana ny kely indrindra amin'ny trano, ary koa zaridaina fitsangatsanganana izay misy fisarihana toy ny roller coaster sy snowmobiles. En Esquiades.com Azonao atao ny mahita ny tolotra rehetra na ho an'ny tobin'ny Sierra Nevada sy ho an'ny maro hafa any Espana, Andorra ary France.
Ny gara Cerler no gara fanaovana ski ambony indrindra ao amin'ny Pyrenees Aragonese. Any amin'ny Lohasahan'i Benasque i Cerler dia tsy mitovy amin'ny an'ny hafa satria voahodidin'ny ala mahavariana sy tampon-tampona izy io. Toy izany koa, manana ny gara Cerler ny tehezan-tendrombohitra lehibe indrindra izay hita ao amin'ilay faritra, eo anelanelan'ny 1.500 sy 2.700 metatra. Ity sisin-tany ity dia manana hantsana skiika 79 kilometatra, natao ho an'ny ambaratonga samihafa ianaran'ny mpitsidika azy.
Ny kalitaon'ny oram-panala dia iray amin'ny lafiny tsara indrindra amin'ny trano fisakafoanana Boi-Taül. Any amin'ny faritanin'i Lleida no misy ny fiantsonan'ny mena maro be, ka ny ankamaroan'ny toerana dia natao ho an'ny mpanao ski amin'ny salantsalany sy avo lenta, tsy ho an'ny olona izay mbola manomboka amin'ny fanaovana ski. Ilay gara ihany koa dia manana faritra natokana ho an'ny snowpark, fantatra amin'ny anarana hoe "freeXperience". Ary koa, singa iray hafa manintona ny gara Boi-Taül dia ny tsy dia be olona ao aminy.
Ity gara ity dia miorina eo afovoan'ny Lohasaha Aragon, indrindra ao amin'ny tanànan'i Jaca. Io seranana io dia misy serivisy fisakafoanana maro be ary 50 kilaometatra ny tehezan-ski. Noho ny toerana misy azy, ny resort ski Astún dia manambatra tanteraka ny fanatanjahantena miaraka amin'ireo fizahan-tany sy fialamboly. Amin'izany fomba izany, ny fialan-tsasatra mankany Astún dia mety ahitana karazana hetsika isan-karazany izay mihoatra ny fanaovana ski..
Any Andorra, ny toeram-pitsangatsanganana Vallnord dia eo amin'ny lohasaha Arcalís sy La Massana. Ny dian-tongotra mihoatra ny 68 dia totalin'ny 93 kilometatra, feno a lanezy avo lenta, antoky ny toerana jeografika an'ny gara. Ity toerana sarotra ity koa dia manana toeram-by bisikileta ho an'ireo tia bisikileta an-tendrombohitra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fitsangatsanganana tanteraka » Ny toeram-pialan-tsasatra tsara indrindra any Andorra sy Espana
Inona no jerena ao amin'ny Basque Country: Avy amin'ny Game of Thrones ka hatrany amin'ny flysch malaza